Published By Myat Shu On Wednesday, September 21st 2011. Under ဆောင်းပါး
ကိုယ်မလုပ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စအတွက် ဒီလိုခံစားရတာကို စိတ်မကောင်းဘူး။ ကလေးတွေက ဘာမှ လုပ်ခဲ့တာမှ မဟုတ်တာ။ သူတို့ အဘိုးကလည်း သူ့အပြစ်အတွက် ဥပဒေအရ ခံသွားပြီပဲ။ ကျန်တဲ့လူမှာ ဘာအပြစ်မှမရှိဘူး။ ဒီကလေးတွေကို အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ နေစေချင်တယ်။ သူတို့ကိုယ်သူတို့လည်း အပြစ်ရှိတဲ့လူတွေရယ်လို့ မသတ်မှတ်သင့်ဘူး -ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လီလီပန်း အဖြူရောင်လေးများက ကနုတ်ပန်းကြွ မင်္ဂလာဘိသိက် ငွေဖလားကြီးထဲ၌ လှလှပပ လန်းလန်းဆန်းဆန်း။ လွန်ခဲ့ပြီးသော ဆယ်စုနှစ်သုံးခုကျော်မှကြီးကျယ် ခမ်းနားလှသည့် မင်္ဂလာအခမ်းအနားပွဲ တစ်ခု၏ မြင်ကွင်းဖြစ်သည်။ ဘိသိက်ခံမင်္ဂလာမောင်နှံမှ သတို့သမီးမှာ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများကို လုပ်ကြံမှုတွင် မြန်မာ့သမိုင်း တရားခံတစ်ဦးအဖြစ် ပြည်သူများအကြား ယနေ့တိုင် နာမည်ဆိုးနှင့် ... Continue Reading
ဧရာဝတီ အထက်ပိုင်းဆီသို့ ဆန်တက်သောအခါ
Published By Myat Shu On Tuesday, September 20th 2011. Under ဆောင်းပါး
မန္တလေးမှ မင်းကွန်းအထိသာ ရေကြောင်းဖြင့် သွားဖူးသူ ကျွန်မအတွက်တော့ ဧရာဝတီမြစ် အထက်ပိုင်းတစ်လျှောက် သင်္ဘောဖြင့် ခရီးသွားရသည့် အတွေ့အကြုံမှာ အဆန်းတကြယ် ဖြစ်နေလေသည်။ ကားနှင့် တစ်ညအိပ်ခရီး သွားရုံဖြင့် ရောက်နိုင်သည့် ဗန်းမော်ခရီးစဉ်ကို သင်္ဘောဖြင့် ၅၉ နာရီခန့် ကြာအောင် စီးခဲ့ရပါသည်။ ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံး မြင်မြင်သမျှ အသစ်အဆန်း ဖြစ်ခဲ့ရသည်မှာ မန္တလေး ဂေါဝိန်ဆိပ်မှ ခွာကတည်းက ဖြစ်သည်။ ဆိပ်ကမ်းနှင့် နီးသော ရေသည် နောက်ကျိမှုန်မှိုင်းသလောက် မြစ်လယ်သို့ရောက်ပြီး၊ လူနေအိမ်ခြေများနှင့် တစ်စထက် တစ်စ ဝေးကွာလာသောအခါ ရေသည် တဖြည်းဖြည်း ကြည်လင်ပီပြင်လာ၏။ မွန်းတည့်ခါနီး နေရောင်အောက်က ဧရာဝတီမြစ်ရေပြင်၏ အလှကား ဆိုဖွယ်မရှိတော့။ ရွှေအိုရောင်လဲ့လဲ့ ပြေးနေ၍ အဝေးတွင်တော့ မဟော်ဂနီရောင်တို့ ယိုဖိတ်စီးဆင်းသည့်နှယ် ... Continue Reading
ကွယ်လွန်ခြင်း ဆယ်စုတစ်စု ပြောင်းသော်လည်း မမေ့ခြင်း အပေါင်းနှင့် စောင်းအင်းလေးမြင့်မောင်
Published By Myat Shu On Monday, September 19th 2011. Under အမှတ်တရ
အမှတ်တရ ပြခန်းကို တစ်ပတ်လည် ကြည့်ပြီးသည်နှင့် ကြည်နူးပီတိတွေ ဖြစ်မိသည်။ ကြည်နူးရမည်ပေါ့။ အမှတ်တရ ရှိမည့်သူကို အမှတ်တမဲ့ မေ့မထားသည့် ပွဲတွေကို ကျွန်တော် လိုလား နှစ်သက်သည်။ လွမ်းလောက်သူတွေကို လွမ်းကြရလိမ့်မည်။ သည်ပွဲက ပညာရဲရင့်သူတို့ပွဲ၊ မမေ့နိုင်သူတို့ တမ်းတကြရသည့်ပွဲ။ သူလို ပုဂ်္ဂိုလ်က လက်ချိုး ရေတွက်လို့ ရလောက်အောင် ရှားသည့်ပွဲ။ သူလိုရှာမှရှားသည့်ပုဂ်္ဂိုလ်၏ အထိမ်းအမှတ်ပွဲကို ယခုလို မှတ်တမ်းမှတ်ရာ အထိမ်းအမှတ် အသုံးအဆောင်များနှင့် သာမက ရှားပါးတူရိယာဟု ဆိုရတော့မလောက် ဖြစ်နေသည့် ဂီတသုခုမ ပစ္စည်းများကိုပါ ပြည့်စုံစွာ ပြထားခဲ့သည်မှာ ၀မ်းမြောက်ပီတိ ... Continue Reading
လိုင်းကားများ ဒဏ်ကြေးကို ငါးဆမှ ဆယ်ဆအထိ တိုးမြှင့်ဖွယ်ရှိ
Published By Myat Shu On Sunday, September 18th 2011. Under သတင်းတိုများ
လိုင်းကားများ စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ပါက ဆောင်ရမည့် ဒဏ်ငွေ ငါးဆမှ ဆယ်ဆအထိ တိုးမြှင့် ကောက်ခံဖွယ်ရှိကြောင်း မထသ (ဗဟို)မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။ ယခင်က မီးပွိုင့်တွင် အတက်အဆင်း ပြုလုပ်ပါက ဒဏ်ငွေ တစ်သောင်းနှစ်ထောင်မှ တစ်သိန်းနှစ်သောင်း အဖြစ်သို့ လည်းကောင်း၊ ကွမ်းတံတွေး ထွေးပါက ဒဏ်ငွေငါးထောင်မှ ငါးသောင်းအဖြစ်သို့ လည်းကောင်း၊ မှတ်တိုင်ကျော်မောင်းခြင်း ပြုလုပ်ပါက ဒဏ်ငွေ ခုနစ်သောင်းအဖြစ်လည်းကောင်း တိုးမြှင့် ကောက်ခံသွားဖွယ်ရှိကြောင်း သိရသည်။ မထသ(ဗဟို)မှ ယာဉ်မှူးများသည် ယခုအခါတွင် လိုင်းကားများ ယာဉ်စည်းကမ်း ချိုးဖောက်မှု ရှိ၊မရှိကို အရပ်ဝတ်ဖြင့် ယာဉ်များပေါ်တွင် လိုက်ပါစီးနင်း၍ မှတ်သားအ ရေးယူလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ “အခု ကွမ်းစားတာတောင် ကြည့်ကြပ် စားရပါတယ်။ သူတို့က ... Continue Reading
မကြည့်စကောင်း ကြည့်စကောင်း ငယ်ငယ်တုန်းက ဓါတ်ရှင်အကြောင်း (အပိုင်း ၂)
Published By Myat Shu On Tuesday, September 13th 2011. Under သီချင်း၊ ရုပ်ရှင်, အမှတ်တရ
သီချင်းနဲ့ဓါတ်ရှင် ၁။ (လူထုကြားက ရုပ်ရှင်သီချင်းများ………..) ဟိုအရင်က လူတွေမှာ နားဆင်ခံစားစရာဆိုလို့ မနက်(၇)နာရီကနေ နေ့လယ် (၁) နာရီထိ တစ်ကြိ်မ်၊ ညနေ (၄) နာရီကနေ ၊ ည (၉) နာရီထိ တစ်ကြိမ် တနေ့နှစ်ကြိမ်လာတဲ့ ရေဒီယိုရှိမယ်။ မြန်မာသီချင်းတွေကို ပြောတာပါ။ ဓါတ်စက်နဲ့ ဖွင့်လို့ရတဲ့ ဓါတ်ပြားရှိမယ်။ တိတ်ရီကော်ဒါ ရှိမယ်။ နောက် တစ်ပတ်တစ်ခါ အသစ်လဲတဲ့ ဓါတ်ရှင် ရှိမယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ဘုရားပွဲရှိမှ ကြည့်ရတဲ့ အငြိမ့်တို့ ဇာတ်တို့ရှိမယ်။ ဒါ အကုန်ပါဘဲ။ နောက် အိမ်တိုင်းမှာ ရေဒီယိုမရှိ။ ဓါတ်စက်မရှိ။ တိတ်ရီကော်ဒါမရှိ။ ဒီတော့လည်း ဇာတ်တွေ ရုပ်ရှင်တွေက သီချင်းတွေကို မက်မက်မောမောနဲ့ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Monday, September 12th 2011. Under ဆောင်းပါး
နိုင်ငံရေးမှာ စိတ်ဝင်စားသည့် ကျောင်းသားများ၏ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများ ၁၉၉၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ပထမပတ်အတွင်း ရန်ကုန်မြို့တွင် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီးနောက်၊ ရက်အနည်းငယ် အကြာတွင် တက္ကသိုလ်ကျောင်းများ ရက်အကန့်အသတ်မဲ့ ပိတ်သွားခဲ့သည်။ ကျောင်းပိတ်ရက်များသည် ၃ နှစ်ကျော် ကြာသွားခဲ့လေသည်။ ကျွန်တော်သည် ထိုကာလအတွင်း စာအုပ်ပေါင်း အတော်များများ ဖတ်ဖြစ်ခဲ့၏။ ထိုကာလမှာပင် ချစ်ခင်ဖွယ်ရာကောင်းသော အငြိမ့်သမကလေးနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ရပါသည်။ ယခုချိန်ထိ ထိုအငြိမ့်သမလေး၏ ချစ်ခင်ဖွယ်ရာ အမူအယာလေးများကို ပြန်တွေးမိတိုင်း သတိရနေဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တွေ့ဆုံခဲ့သော အငြိမ့်သမကလေးမှာ အိဇုအငြိမ့်သမကလေးဖြစ်သည်။ သူမသည် ဂျပန်ဝတ္ထုတိုတစ်ပုဒ်မှ အငြိမ့်သမလေး တစ်ဦးဖြစ်၏။ ထိုဝတ္ထုကို နိုဗယ်လ်ဆုရ ဂျပန်အမျိုးသား စာရေးဆရာကြီး ယစုနရိ က၀ဗတ (Yasunari Kawabata) က အိဇုအငြိမ့်သမကလေး အမည်ဖြင့် ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Sunday, September 11th 2011. Under သူတို့အာဘော်
ခုတလော သတင်းစာတွေ ကောက်ကိုင်လိုက်တဲ့ အခါတိုင်း ဝမ်းသာပီတိဖြစ်စရာ သတင်းတွေနဲ့ ကြော်ငြာတွေကို အများဆုံးတွေ့နေ ရတယ်။ အနယ်နယ် အရပ်ရပ်က ဆရာကန်တော့ပွဲ သတင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာကျောင်းတွေ သာမက နိုင်ငံခြား သာသနာပြုတွေ ဖွင့်လာတဲ့ စိန့်ကျောင်းတွေနဲ့ ကွန်ဗင့်ကျောင်းတွေမှာ နေခဲ့ကြတဲ့ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားဟောင်းတွေကပါ လုပ်ဆောင် လာကြတာ ဝမ်းသာစရာ မြင်တွေ့နေရတယ်။ လူရာမဝင်ကြ သတင်းစာတွေမှာ ဖတ်ရတာကို တစ်နေ့တစ်နေ့ ဆယ့်လေးငါးခုလောက် ရှိတယ်။ အထက်တန်း ကျောင်းတွေမှာ လုပ်သလို တက္ကသိုလ်တွေမှာလည်း ဘာသာရပ် အလိုက်၊ နှစ်အလိုက် လုပ်ကြတယ်။ ကျောင်းဆရာ ဆိုတာ ... Continue Reading